Siyoba njalo isimo sezulu eziQhingini zaseBalearic ngo-2038 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yize kunzima kakhulu ukwazi ukuthi isimo sezulu sizoziphatha kanjani eminyakeni eyishumi noma ngaphezulu, namhlanje sinezinhlelo ezingasiza izazi zezulu nabathandi besimo sezulu ukuthola umbono wokuthi yini engenzeka. Ngakho-ke, owayengumphathi wendawo ye-State Meteorological Agency (AEMET) eziQhingini zaseBalearic, u-Agustí Jansà, wakwazi ukuchaza izinto ezikhathaza kakhulu kwiDiario de Mallorca.
Ngokusho kochwepheshe, ngaphandle kokuthi kuthathwe izinyathelo ezinqala, ikusasa libukeka mpunga impela. Lesi kuzoba isimo sezulu eBalearic Islands ngonyaka ka-2038.
1 Ukuphakama kwamazinga amathathu
2 Izinga lolwandle lizokhuphuka ngamasentimitha angama-25
Ukuphakama kwamazinga amathathu
Okwamanje, izinga lokushisa elijwayelekile leplanethi selikhuphuke cishe ngo-1,4 degrees Celsius kusukela ngo-1880. Kungabonakala njengokungenani elingabalulekile, kodwa kusenele ukwephula amarekhodi abalulekile unyaka nonyaka. Kanjalo, eziqhingini zeziqhingi zaseBalearic ngonyaka ka-2038 izinga lokushisa lizoba ngama-3 degrees ngaphezulu ehlobo. Ubusika buzoqhubeka nokuthamba, ngamanani angaba ngaphezulu kwengxenye yezinga eliphakeme. Ngakho-ke umuzwa wokuthi akukho "ukuwa" uzoqhubeka nokukhula njengoba isikhathi siqhubeka.
Uma sikhuluma ngamazinga okushisa olwandle, ngesikhathi sasehlobo kungafinyelela ezingeni eliphakeme, okuzoba nomthelela kwi-posidonia futhi, nakwezilwane.
Izinga lolwandle lizokhuphuka ngamasentimitha angama-25
Amasentimitha angama-25 elindele ukuthi lizovuka ngokwemigomo kungenzeka angabi maningi, kepha uma sinaka ukuthi inhlokodolobha efanayo yesifundazwe, iPalma, icishe ibe sezingeni lolwandle, kuyabonakala ukuthi amanye amabhishi azothinteka. Futhi lokho akushiwo ukuthi lapho izingqimba ezibandayo zisondela namanzi ethukuthela, ingozi yezikhukhula izokwanda kuphela.
Uma kunokuthile okuhle kukho konke lokhu, ngokuqinisekile kunemali eshisiwe ukuze okungenani uhhafu wezimoto ezijikelezayo kube kagesi, ukuze sizoba neziqhingi ezithule kancane.
Ukufunda izindaba ezigcwele, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Siyoba njalo isimo sezulu eziQhingini zaseBalearic ngo-2038
Konke okwenzeka emhlabeni kungenxa yomuntu ngaphandle kokucekela phansi indawo yethu yokuhlala besizoyinakekela njengento ebaluleke kunazo zonke esinayo, ungasheshi ukudlula kwesimo sezulu, yingakho kumele siqale ukunakekela iplanethi yethu ngokuncane ukugawulwa kwamahlathi ukuze kucishwe izilwane njll